iPhone 11: Smartphone manara-penitra misy fanampiny maro - Victor Mochere
iPhone 11: Smartphone manara-penitra misy fanampiny maro
Ny iPhone 11 avy amin'ny Apple dia finday mahomby ho an'ireo mpampiasa izay tia endrika tsotra nefa kanto nefa tsy mila mampandefitra ny endri-javatra. Manana fiasa mampientam-po izy io - ny fakan-tsary namboarina tao amin'ny iPhone dia tena mahavariana, satria manampy amin'ny fakana sary miaraka amin'ny lantihy ultra-malalaka sy malalaka. Na iza na iza mampiasa vola amin'ny Apple iPhone 11 mahazo fampifangaroana tsara ny endrika mahazatra sy ny teknolojia maoderina. Ho fanampin'izay, ny iPhone 11 dia hampiditra fihodinana ara-teknolojia izay mahatonga ny finday tsy azo ampitahaina.
Saingy tsy ny fakantsary ihany no manana fiasa fanampiny maro ao amin'ny iPhone 11, izay manova ny smartphone ho fakantsary hanaovana antso an-telefaona. Ny trano manify vita amin'ny fitaratra sy alimo, anisan'izany ny chipset bionic A13, dia tantera-drano mandritra ny 30 minitra. Ny tombony lehibe dia ny fakana sary amin'ny alina, izay azo atao amin'ity fitaovana ity. Amin'ny fitambarany, ny iPhone 11 dia misy amin'ny fitahirizana telo - misy toerana fitahirizana mitentina 64 gigabytes, 128 gigabytes ary 256 gigabytes. Ny fampiratiana ny finday dia manana habe 6.1 santimetatra Liquid Retina HD fampisehoana ary tsy misy menaka.
Tokony ho iPhone 11 na iPhone 11 Pro ve izany? Ny fampiasana dia azo inoana fa manana anjara toerana eto. Raha ny iPhone 11 mahazatra dia tsara kokoa ho an'ny olona mampiasa haino aman-jery sy manao antso an-telefaona, ny iPhone 11 Pro dia tsara indrindra ho an'ireo izay te hampiasa fakantsary finday na te-hanana fitaovana avo lenta fotsiny. Amin'ny fampitahana mivantana eo amin'ny dikan-teny mahazatra sy ny dikan-teny premium, dia misy fahasamihafana lehibe, ka tokony hiheveran'ny tsirairay ho an'ny tenany hoe inona ny fiasa manan-danja kokoa amin'izy ireo ary inona ny fiasa tokony ho hita.
Arovy soa aman-tsara ny findainao manokana
Tokony sa tsy tokony…?
Ho an'ny maro, ny iPhone dia tena fampiasam-bola, indrindra raha ny momba ny fakan-tsary saro-pady izay mendrika fiarovana manokana. Noho izany antony izany, an iPhone 11 raharaha tokony hampiasaina hiarovana ny smartphone. Ny singa saro-pady toy ny fakan-tsary manara-penitra avo lenta dia simba haingana noho ny fianjerana. Inona anefa no tsy maintsy dinihina mba hahitana ny saron-tava tsara? Ireo karazana tranga telo ho an'ny finday avo lenta dia mahazatra indrindra:
Ny fonon'ny flip dia manana asa fiarovana avo, satria miaro ny anoloana sy ny aoriana amin'ny fianjerana. Saingy sarotra ny mividy fiarovana tsara ho an'ny maro, satria alohan'ny hampiasana ny smartphone dia tsy maintsy misokatra indray.
Amin'ny ankapobeny, ny bumpers dia mifanohitra amin'ny tranga flip, mametraka sisiny silikônina manodidina ny smartphone izy ireo mba hifehezana ny fianjerana. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra anefa, na ny efijery na ny ambadiky ny smartphone dia tsy voaaro.
Ho an'ny finday raitra manokana toa ny iPhone 11, ny fonon'ny finday dia azo antoka fa raharaha sarotra. Izy ireo dia natao manokana ho an'ny endrik'ilay smartphone manify, ka manome fiarovana fanampiny na dia ho an'ny finday saro-pady aza. Na izany aza, misy tranga finday - toy ny fitoeran-jiro ivelan'ny trano ho an'ny fanoherana ny rano - na kitapo silicone mety ho an'ny olona very haingana ny findainy. Ny Tough Case dia iray amin'ireo tranga henjana indrindra ho an'ny finday.
Tsy maintsy manapa-kevitra ho an'ny tenany ny tsirairay raha te hiaro ny findainy sy ny fakantsarin'ny iPhone 11 izy ireo na tsia. Mazava ny tolo-kevitra, na izany aza - ny sarony fiarovana mety dia mitondra anjara biriky lehibe amin'ny fiarovana tsara kokoa ny smartphone ary, amin'ny tranga sasany, ny fampisehoana azy. Na izany aza, tsy momba ny fiarovana ny smartphone fotsiny izany, fa mahatonga azy ho zavatra tsara tarehy na azo ampiasaina ho fanambarana. Amin'izao fotoana izao dia misy safidy marobe amin'ny tranga smartphone samihafa izay afaka manambatra ny roa.
Fahadisoana tokony hohalavirina rehefa mividy vata fahitalavitra